Taratasy sary, sarimihetsika ara-pahasalamana, takela-bolan'ny masoandro - Baoding Lekai International Ltd.
Tamin'ny 24 desambra 1953, ny fivorian'ny governemanta faha-199 an'ny filankevi-panjakana dia nanao "fanapaha-kevitra momba ny fametrahana tambajotran-tsolika sy ny indostrian'ny sarimihetsika" ary nanapa-kevitra ny hanangana orinasa mpamokatra sarimihetsika any Shina.
Chemecial Photographic Ho an'ny Mini-Lab
Miaraka amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy, ny olona dia manome lanja bebe kokoa ny fahasalamana. Ny fiarovana ara-tsakafo dia singa iray lehibe mitaona ny fahasalaman'ny vahoaka izay noraisin'ireo mpanamboatra sakafo vahiny sy mpanara-maso ...
Sarimihetsika PET – fitaovana fonosana fananana avo miaraka amin'ny antoka azo antoka.
Miaraka amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy, ny olona dia manome lanja bebe kokoa ny fahasalamana. Ny fiarovana ara-tsakafo dia singa iray lehibe mitaona ny fahasalaman'ny vahoaka izay noraisin'ireo mpanamboatra sakafo sy mpanara-maso avy any ivelany hatrany ho zavatra lehibe. Fonosana sakafo, indrindra, ireo entana fonosana ...
Fampitomboana ny tsena fangatahana amin'ny sarimihetsika optika BOPET.
Ny tsenan'ny horonantsary Optical PET dia mety be dia be: Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny FPD, ny teknolojia fitsitsiana angovo. ary indostrian'ny PV, ny sarimihetsika PET optique dia mampiseho fahamboniana matanjaka. Ho an'ny LCD, farafahakeliny 7-8pcs ny horonantsary PET optique tokony hampiasaina (sarimihetsika 2 diffuser, horonantsary prisim 1, horonantsary retardation 2, 1 a ...
Vaovao Item 5, sarimihetsika BEF.
Amin'izao fotoana izao, ny teknolojia sarimihetsika BEF dia ampihimamba amin'ny 3M, ho an'ny TFT LCD, Merck any Allemana nanandrana nanaparitaka an'io toe-javatra io, ny fomba fananganana ny gradient spiral ao anaty sarimihetsika amin'ny alàlan'ny fanaparitahana ireo fitambarana simika maivana entin'i Mr.DJBroer, Holand, hanaovana Sarimihetsika N.phase BEF. Saingy ity fomba ity dia tsy maintsy ...